Duuliyayaasha oo ku dhex hurda diyaaradaha. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Diyaarad ku jirta hawada. Sawirle Adrin Snider/Scanpix
Duuliyayaasha oo ku dhex hurda diyaaradaha.
La daabacay onsdag 19 oktober 2011 kl 11.47
Midowga Duuliyayaasha Iswiidhan ayaa sheegay in badan oo ka mid ah baaylootyada ama duuliyayaasha in ay hurdaan marka ay ku jiraan shaqada oo ay kaxeynayaan diyaaradaha.
"Duuliyayaasha waa ay hurdaan marka ay soo kacaana oo ay eegaan hareertoodana waxay arkaan isla duuliyaha kale oo isna hurdaya " ayuu yiri madaxa ururka duuliyayaasha diyaaradaha ee Iswiidhan Gunnar Mandahl oo la hadlay Raadiyaha Iswiidhan.
Feker uruurin uu sammeeyay ururka ay leeyihiin duuliyayaasha oo su’aalo lagu weydiiyay 625 duuliye ayaa waxaa la soo daabacay maanta oo arbaca ah iyada oo rayi aruurintan ay sheegeyso in kala bar duuliyayaasha diyaaradha in ay seexdaan xilliga duulimaadka ay ku dhex jiraan iyaga oo ku dhex hurda halka diyaaradda laga kaxeeyo iyada oo toddobo ka mid ah tobankii duuliye ay sheegeen in ay sammeeyeen qaladaad inta ay ku guda jireen duulimaad taasina ay sabab u tahay daal haya.
Ururka duuliyayaasha ayaa doonaya in hayada gaadiidka dalka iyo wasiirada gaadiidka Catarina Elmsäter Svärd in ay u howl galaan sidii wax looga bedeli lahaa sharciyada midowga yurub ee saacadaha ay shaqeeyaan dadka kaxeeya diyaaradaha iyada oo ururka uu leeyahay taasi waxay faa’iido ugu jirtaa shirkadaha diyaaradaha.